बाबालाई फोन गरेर भनिन्- ‘म मर्दैछु’, त्यसपछि ६ तला माथिबाट हाम्फालिन् ! – Sandes Post
May 8, 2022 1157
एक मोडलले भवनको छैटौं तलाबाट हाम्फालेकी छिन् । उनले आ त्मह त्या गर्ने नियतले हाम्फालेको भए पनि उनको ज्यान भने जान पाएन ।
भारतको राजस्थान राज्यको जोधपुर सहरको रातानाडामा रहेको एक होटलबाट उनले हा म्फालेकी हुन् । मोडलको नाम गुनगुन उपाध्याय भएको बताइएको छ ।
उनी जोधपुरकै माताका थान निवासी गणेश उपाध्यायकी छोरी भएको बताइएको छ । उनी रातानाडास्थित होटल लर्डसमा बसेकी थिइन् । अहिले अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको छ ।
पुलिसले भारतीय मिडियालाई दिएको जानकारीअनुसार गुनगुन मोडलिङ गर्छिन् । उनी शनिबार उदयपुरबाट जोधपुर आएकी थिइन् । जोधपुर आएपछि उनले पितालाई फोन गरेर आफू आ त्मह त्या गर्न गइरहेको बताएकी थिइन् । उनले पितालाई आफ्नो अन्तिम अनुहार हेर्न भनेकी थिइन् । त्यसपछि पिता गणेशले तत्काल पुलिसमा सम्पर्क गरेका थिए ।
पिताको सूचनापछि एसीपी देरावर सिंहले फोन नम्बरका आधारमा गसनगुन भएको ठाउँ पत्ता लगाएका थिए । त्यसपछि पुलिस होटल पुगेको थियो तर पुलिसले उनलाई बचाउन नपाउँदै उनले छैटौं तलाबाट हा म्फालिन् । उनलाई तत्काल मथुरादास माथुर अस्पताल लगियो ।
Prevप्रचण्डको धम्कीले देउवाजस्तो अरू डराउँदैनन् – ओली
Nextपार्लर नगई अनुहार चम्काउन चाहानुहुन्छ ? उसोभए यी ६ घरेलु तरिका अपनाउनुहोस्